Iza isika | Shijiazhuang Neming Import & Export Co., Ltd.
BSCI voamarina, manokana amin'ny Design and Manufacture akanjo fanatanjahan-tena isan-karazany, akanjo anaovan'ny fialam-boly, akanjo ivelany mifototra amin'ny serivisy apetraka. Mba hampiavaka ny fitafianao, afaka manao pirinty lamba landy isan-karazany izahay, embossing, sublimation, pirinty famindrana hafanana, amboradara sy maro hafa. Ny akanjonay dia manana kalitao premium & fananana miasa.
Tsy vitan'ny hoe manolotra ny akanjo fampiasa premium izahay, fa koa serivisy ho an'ny mpanjifa mihaino. Ny kolontsainay dia mifantoka amin'ny: kalitao, fahamendrehana, serivisy.
Manana mpiasa mahay manome ny asa-tanana faran'izay tsara izahay.
Ny varotra dept. dia hanome fifandraisana ara-potoana mba hahazoana antoka fa voavaly ny fanontanianao na ny olana rehetra azo vahana amin'ny voalohany.
Ny deptantsika QC dia hanara-maso ny famokarana iray manontolo mba hahazoana antoka fa ny baiko tsirairay dia novokarina arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Ny santionany dept. efa niaina mpanao maodely. Atolotra ny tolotra bespoke. Ny fitafianao tsy manam-paharoa dia azo amboarina ho an'ny endrikao / santionanao na sary na hevitra avy aminao.
Ny lamba sy kojakoja ampiasainay dia milamina amin'ny tontolo iainana, AZO maimaim-poana, tsy manimba vatana. Manamarina azy ireo ny OEKOTEX-100, BLUESIGN sns.
Mandritra ny famokarana, ny mpiasanay QC dia mitarika fifehezana kalitao fatratra araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Vita ny fitsirihana an-tsokosoko .Raha nahita olana izahay, dia azo alamina avy hatrany.
Alohan'ny hanaterana azy dia manaraka ny fenitra fitsirihana AQL level II izahay. Hataonay antoka fa ny entana natolotra tsy misy kilema ary mahafaly ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Ny tsenanay sy ny mpanjifantsika
Ny vokatray dia amidy any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Eropa, Oceania sns Ny vidiny antonony, fifehezana ny kalitao, fandefasana ara-potoana dia mahatonga anay hiara-miasa maharitra amin'i Kappa, All Blacks, MUFC, GUINNESS, GAA, RIRA sns.
Manana fahaizana fitaterana mahery vaika izahay hitarika ny fandefasana ara-potoana amin'ny alàlan'ny ranomasina na amin'ny rivotra. Ary koa, manana fiaraha-miasa maharitra amin'ny orinasa misimisy izahay, toy ny FEDEX, TNT, UPS, DHL.
Manaja ny zon'olombelona izahay; miantoka ny fahamendrehan'ny mpiasa sy ny fiahiany; Aza mampiasa ny asan'ny ankizy mihitsy.
Miankina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, asa soa sns.